Malaayiin Shacabka Kenya ah oo bilaabay codbixinta doorashada madaxtinimo. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Malaayiin Shacabka Kenya ah oo bilaabay codbixinta doorashada madaxtinimo.
Malaayiin Shacabka Kenya ah oo bilaabay codbixinta doorashada madaxtinimo.
Dalka Kenay ayaa waxaa saacado ka hor ka bilowday cod bixinta doorashada madaxtinimo ee ka dhacaysa dalkaasi ayadoo ilaa labaatan milyan oo shacabka Kenya ah ay isku diiwaangaliyay in ay codadkooda dhiibtaan.
Sideed musharax ayaa ku tartamaysa doorahsada madaxtinimo ee dalka Kenya, madaxweyen Uhuru kenyata iyo hogaamiyuaha mucaaradka Raila Odinga ayaa lagu soo waramaya in ay ugu cad cadyihiin loolankasi doorashada.
Guddiga doorashooyinka dalkaasi Kenya ayaa sheegey in qaab cadalad ah ay u dhicidoonto doorahsadaasi ayadoo madaxweyne Kenyata uu shacabka ugu baaqey in ay ilaaliyaan sharafta dalkooda ayna ka qeyb qaatan habsani u socodka doorahsada.
Dadka ayaa safuuf dhaadheere ku jira yadoo goobaha qaar ay mar horey bilaabatay oin dadku ay codadkoodi dhiibtaan.
Gudiga doorashada ayaa waxa ay sharciyan haystaan in muddo 7 maalmood gudahood ah ay ku dhawaaqaan natiijada madaxwaynanimada.
Previous articleDuuliye Sare Asli Xasan Cabaade oo qurba jooga ugu baqaday in dalkooda ay maalgashadaan.
Next articleGudoomiyaha Barlamaanka Soomaaliya oo gaaray South Africa